Juventus oo Ka Badisay Kooxda Cagliari – Radio Muqdisho
Kooxda Cagliari ayaa waxaa caawo garoonkeeda Sant’Elia 1-3 uga badiyay kooxda Juventus.
Kooxda Juventus oo hogaamineyso horyaalka talyaaniga ee Serie A-da ayaa bilowgii qeybtii hore ee ciyaarta waxa labo gool oo deg deg ah u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Carlos Tevez iyo Arturo Vidal,sidasi ayaa qeybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay.
Ciyaaryahan Fernando Llorente ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Juventus.
Ciyaaryahan Luca Rossettini ayaa daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta goolka kaliya u dhaliyay kooxda Cagliari.
Kooxda Juventus ayaa horyaalka talyaaniga ku hogaamineyso 39-dhibcood,halka kooxda Cagliari ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Roma oo kaalinta labaad uga jirta horyaalka talyaaniga ayaa sabtida la ciyaari doonto kooxda AC Milan.